म उता भगवानको पूजा गर्न थालें, यता पापीले मेरी मुनाको हत्या गरिदिएछः पूर्वसचिव कार्की – Hamrosandesh.com
ललितपुर सानेपास्थित घरमै मुनालाई प्लास्टिकको पिर्काले हिर्काएर चौधरीले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘बिहान १० बजेर २० मिनेटतिर विजयले मुनालाई घाँटीमा डोरीले बाँधेर भुइँमा बजारेको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘मुना भुइँमा लडेपछि कपाल समाती टाउको बजारेर प्लास्टिकको पिर्काले हिर्काएको देखिन्छ ।’ उनको घरमा सुत्ने कोठा र बाथरुमबाहेक अन्यत्र सीसीटीभी छ । प्रहरीले अर्जुनका भनाइ, घरमा काम गर्ने अन्य कामदार र सीसीटीभीलाई आधार बनाएर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।
घटनास्थलमा खटिएका महाशाखाका प्रवक्ता एसपी मुकेश सिंहले मुनाको हत्या कामदार विजयले गराएको सीसीटीभीबाटै पुष्टि भएको बताए । ‘मुनाको हत्या विजयले गरेकामा दुईमत रहेन’, एसपी सिंहले भने, ‘तर, किन हत्या गर्‍यो भनेर हामी अनुसन्धानमै छौं ।’ मुना र विजयको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रहरीले पाटन अस्पतालमा लगेको छ । ‘चौधरी परिवारकै प्रिय थियो’ म पशुपतिनाथको दर्शन गर्न बिहानै निस्किएको थिएँ । उनी (मुना कार्की) घरमै यताउता गर्न थालिन् । त्यसैले म मात्रै मन्दिर गएँ । तर, पशुपतिबाट फर्किंदासम्म यस्तो घटना भयो ।
म उता भगवानको पूजा गर्न जाने, घरमा यस्तो नराम्रो घटना हुने ? यस्तरी मार्दा कति पीडा भयो होला ? कति चिच्याइन् होला ? कति दुख्यो होला ?म घर आउँदा गेट बन्द थियो । बोलाएँ, बोलिनन् । गेट खोलेर भित्र छिरें । टेबलमा विजय (विजय चौधरी) पछारिएको थियो । भान्सामा छिरें । रगतमा लतपतिएको देखें । मैले केही सोच्न सकिनँ । प्रहरीलाई सम्झें, फोन गरेर बोलाएँ । पापीलाई सानैदेखि पालेर राखेको थिएँ । यस्तो घटना भयो । यस्तो आपत्ति आइलाग्यो, कसरी सम्हालिन सक्छु ? मुनाको हात बाँधिएको थियो । घाँटीमा डोरीले कसेर मारेजस्तो देखिन्छ । डाइनिङ हलमा भएको एउटा मेच भाँचिएको र प्लास्टिकको पिर्का टुक्राटुक्रा भएको देखें । त्यति गर्दासम्म उनले किन प्रतिकार गर्न सकिनन् ? अचम्म लागिरहेको छ ।चौधरी सात–आठ वर्षदेखि हाम्रो घरमा बस्दै आएको थियो । कसैसँग नराम्रो सम्बन्ध थिएन ।
बाबुलाई दिनको ८–१० पटक त म्वाइँ खान्थ्यो । खुब माया देखाउँथ्यो । यस्तो गर्ला भन्ने सोच नै आएन । मैले छोराछोरीलाई कसरी मुख देखाउने ? के भनेर चित्त बुझाउने ? अब एक्लै के गर्न सक्छु ? मेरी मुना मलाई छाडेर गयौ । अब कसरी बाँच्नु ?
(पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीले आफन्तसँग गरेको कुराकानीमा आधारित) अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।